Ukuvuvukala, izingxenye zamagagasi namagagasi amakhulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuvuvukala, izingxenye zamagagasi namagagasi amakhulu
Uma ucabanga ngolwandle nolwandle, ucabanga ngokushesha ngomsindo owenziwa amagagasi. Akunakwenzeka ukucabanga olwandle ngaphandle kwamagagasi. Kusukela sisebancane basifundisa ukuthi amagagasi asemkhiqizweni oqhubekayo nasekubhujisweni nokuthi angamandla ahamba ngaphezu kolwandle.
Namuhla sizokwazi konke okuphathelene nakho ukuvuvukala, izingxenye zegagasi namagagasi amakhulu bhalisiwe emhlabeni wonke. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngokusebenza kwezilwandle nezilwandle?
1 Izici ze-Wave
2 Izindawo lapho kwenzeka khona ukuvuvukala
3 Izingxenye zegagasi
3.1 Umugqa wamanzi namanje
3.2 Ukuqubuka kwegagasi
4 Amagagasi amakhulu
Njengoba sekuvele kwaziwa, umoya ubhekene nokwenziwa kwamagagasi ahamba ebusweni bamanzi olwandle nolwandle futhi adlala indima ebalulekile empilweni yasolwandle. Ngaphezu kwalokho, amagagasi athinta ngendlela ebalulekile ukuguqulwa kwezindawo ezisogwini. Ngokuya ngohlobo lokuvuvukala ogwini, kuzothatha uhlobo oluthile noma olunye.
Amagagasi ahlukaniswe ngezinhlobo eziningana kuya ngendawo kanye namandla akheke ngawo. Owokuqala yi- amagagasi amanzi ajulile ezikhiqizwa ezindaweni lapho ulwandle oluphansi kakhulu futhi zingabi nomthelela kunoma isiphi isici ekukhiqizeni nasekuguqukeni kwegagasi. Ngakolunye uhlangothi, sinakho amagagasi asogwini ezithonywa yi-morphology yaphansi kolwandle njengoba inokujula okuncane.
Amagagasi angukunyakaza kwamagagasi, ukugeleza ngezikhathi ezithile kobuso bolwandle, okwakhiwa ngamakhokho nokudangala okuhamba kuye phezulu. Zibonakala kakhulu nge ubude besikhathi, isikhathi, ithambeka, ukuphakama, ukuphakama, kanye nejubane lokusabalalisa.
Amagagasi ahluka kakhulu ukuthi angakwazi ukuwahlaziya futhi awachaze. Ngakho-ke, kusetshenziswa izindlela zezibalo. Amagagasi amanzi ajulile akhiqiza ukunyakaza okuvamile noma okuncane ebusweni bezilwandle nolwandle esikubiza ngamagagasi lapho ukuphakama kwegagasi kuphansi ngokuqhathaniswa nobude begagasi. Ukuvuvukala kusakazekela olwandle, kufinyelela ezindaweni ezikude kakhulu nemvelaphi.
Izindawo lapho kwenzeka khona ukuvuvukala
Izindawo eziyinhloko lapho kwenziwa khona amagagasi yilezo lapho kuvunguza imimoya kusuka entshonalanga ezindaweni ezipholile zombili izingxenyana zomhlaba. Ngaphandle kwalezi zifunda, kunendawo eyodwa kuphela ebalulekile enokwenziwa kwamagagasi. NguLwandle lwase-Arabia. Kule ndawo, phakathi nezinyanga zikaJuni, Julayi no-Agasti, kukhona ukuvuvukala okunamandla okubangelwa yisiphepho sasehlobo.
Kuyaqabukela kakhulu ukuthi imimoya yezohwebo ikhiqize amagagasi amakhulu. Noma kunjalo, izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo zikhiqiza amagagasi anamandla omumo ongafanele. Amagagasi amaningi abonwe ezifundeni ezisentabeni asuka ezifundeni eziphakeme futhi asakazeka ngokukhululeka ngaphezu kwezinkulungwane zamakhilomitha.
Izifunda lapho imvamisa yomoya iphezulu ikhiqiza amagagasi anomsebenzi omkhulu nosayizi omkhulu. Ibhande lesiphepho eliseningizimu yindawo ekwaziyo ukudala amagagasi amakhulu, ngoba imimoya enamandla futhi ephikelelayo iyaqoshwa.
Yize sazi amandla okuvuvukala nokuthi usebenza kanjani maqondana nejubane nokuqondisa komoya, ngeke sime lapho. Lapho kwenziwa igagasi, lihlukaniswa libe izingxenye eziningana.
Umugqa wamanzi namanje
Lo mugqa uhambelana nolwandle lapho ayithintwa amagagasi. Lona umugqa othathwa njengesethenjwa solwandle isikhathi eside ukuze kuthi, lapho amagagasi enzeka, ukuphakama kwamagagasi kungezwe futhi kususwe maqondana naleso silinganiso. Lo mugqa wamanzi amile uphawulwa maphakathi negagasi lamanzi ajulile futhi utholakala ngaphansi lapho amagagasi esogwini.
Mhlawumbe le yingxenye eyaziwa kakhulu kubo bonke. Kuyindawo ephakeme kakhulu yegagasi. Idume ngama-surfers futhi yamukelwa ngamanzi amhlophe nogwebu olwenziwa lapho igagasi liqala ukugoba nokuwa.
Kuphambene nobubanzi begagasi. Kuyindawo ephansi kunazo zonke. Ukuze ulibone, iphuzu eliphansi kakhulu phakathi kwamagagasi amabili kufanele libonwe.
Ukuphakama kuvame ukudideka ne-crest. Kodwa-ke, ukuphakama kwegagasi ngumehluko phakathi kwesiqongo nesigodi. Lokho izinyathelo zebanga ukuphakama kwegagasi.
Ingabe ulinganisa ibanga eliqondile phakathi kwamagagasi amabili. Isilinganiso singenziwa phakathi kwe-crest ne-crest noma isigodi nesigodi.
Isikhathi segagasi yisona esikalayo isikhathi esenzeka phakathi kwegagasi linye nelinye. Lesi silinganiso senziwa ngokukhetha iphoyinti elihleliwe futhi kubalwa isikhathi esithathayo ukuze ukuqhuma kwegagasi kudlulele esiqongweni sesibili. Lesi sikhathi silinganiswa futhi kusukela esigodini kuya esigodini.
Imvamisa icishe ifane nesikhathi, kepha ngomehluko ukuthi ilinganisa kuphela inani eliphelele lamagagasi adlula endaweni yesethenjwa ngeyunithi ngayinye yesikhathi.
I-Amplitude ibanga eliphakathi kolayini wamanzi amile kanye ne-crest yegagasi. Ungasho ukuthi ukuphakama kwaphakathi kwegagasi.
Kuwo wonke umlando kube namagagasi amakhulu adale umonakalo omkhulu. Kepha lakhiwa kanjani igagasi elikhulu?
Ukuze lezi zinhlobo zamagagasi zenzeke, umoya onamandla uyadingeka ukukhiqiza ukuhamba kobuso bolwandle kanye ne-morphology eyanele yolwandle. Uma ulwandle lunalo ukudangala okujule ngamakhilomitha ambalwa (njengenganono) igagasi lizokwazi ukufinyelela ogwini ngawo wonke amandla alo, ngoba alilahlekelwa ngamandla ngenxa yokuxabana okuqhubekayo naphansi.
Ngale ndlela, kungakhiqizwa amagagasi amakhulu aba yinselelo kubathandi be-surf.
Ngalolu lwazi ungafunda okwengeziwe ngokuguquguquka kwezilwandle nezilwandle zethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukuvuvukala, izingxenye zamagagasi namagagasi amakhulu
Angelica Snow kusho
Izinto ababelana ngazo zinhle kakhulu futhi kuyasiza kakhulu ukufundisa ngoba banolwazi, imidwebo nokubhala kwabo kuyaqondakala kunoma ngubani ofundayo.
Phendula u-Angelica Snow